Igagasi elibandayo eJapan: izwe libhalisa izinga lokushisa eliphansi kakhulu eminyakeni engama-48 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isithombe - Sputniknews.com
Ubusika buvame ukufana nesithwathwa, ukuwa kweqhwa, izindawo ezimhlophe nezingubo ezifudumele. Kepha uma ungajwayele kakhulu amazinga okushisa aphansi, ngeke ube nesikhathi esibi kuphela kepha kuzofanela nokuthi ugqoke ibhantshi elihle ukukugcina ufudumele. EJapan, yize njalo ngonyaka imvula yehla ngesimo seqhwa, Kwase kuyiminyaka engama-48 izakhamuzi zakhona zingaboni izwe lazo limhlophe kangako.
Kusukela ngoMsombuluko owedlule, ngoJanuwari 22, bebehlushwa umkhuhlane obandayo okubukeka sengathi okwamanje abafuni ukuhamba.
Isiphepho ukungena komoya obandayo ovela eSiberia kanye neqhwa elinomphumela wechibi eligubuzele iJapan ngeqhwa. Kepha manje inkinga akuyona iqhwa uqobo, kepha amazinga okushisa aphansi abangelwa umoya waseSiberia oqhubeka nokufika ezweni namuhla. Ngenxa yalokhu, enhlokodolobha, eTokyo, babhalise -4ºC, okuyizinga lokushisa eliphansi kunawo wonke kule minyaka engama-48 edlule, kodwa kwezinye izindawo baba nokubi kakhulu.
Lokhu kunjalo ngalabo bantu abahlala eduze noma abafuna ukuyobona i- INtaba iFuji (Fujisan). Kukhona ukushisa kwe- -26'6ºC namuhla, Januwari 26. Inani eliphansi kakhulu kangangokuba selimboze intaba enhle ngokumhlophe njengoba kungakaze kubonwe.
Ngeshwa, lapho izinto zenzeka ongazijwayele, akuyona into engavamile ngawe ukuzisola ngomonakalo. Ukuwa kweqhwa okukhulu eTokyo kudale isiphithiphithi kwezokuthutha zomphakathi, kanye nokulimaza amakhulu abantu. Ngokwesinye isandla, ukuqhuma kweNtaba iMtoshirane kanye nokudilika kwenqwaba okulandelayo enkabeni yezwe kubangele ukufa komuntu oyedwa kwalimala abayishumi nambili. endaweni yokushibilika eqhweni.
Inhlangano yezimo zezwe balindele ukuwa kweqhwa okungafika kumasentimitha angama-40 esifundeni esisenyakatho neHokkaido kuze kube uMgqibelo, ngakho-ke uma ukule ndawo qaphela.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Igagasi elibandayo eJapan: izwe libhalisa izinga lokushisa eliphansi kunawo wonke eminyakeni engama-48